Muxuu ka yiri Mourinho wararka xanta ah ee la xiriirinaya inuu noqonayo badalka Zidane ee kooxda Real Madrid? – Gool FM
Muxuu ka yiri Mourinho wararka xanta ah ee la xiriirinaya inuu noqonayo badalka Zidane ee kooxda Real Madrid?
(Madrid) 20 Sebt 2019. Zinedine Zidane ayaa halis ugu jira in laga ceyriyo shaqada tababarka ee kooxda Real Mardrid, kaddib guuldaradii 3-0 aheyd ay kala kulmeen naadiga Paris St Germain, kulankii Champions League ee ka dhacay garoonka Parc des Princes habeenkii Arbacada aheyd.
Jose Mourinho ayaa iska fogeeyay wararka xanta ah ee la xiriirinaya inuu noqonayo badalka Zinedine Zidane ee kooxda Real Madrid.
Saxaafada gudaha dalka Spain ayaa waxay bilaabeen inay si joogta ah kaga hadlaan badalka macalin Zidane, iyo qiimaha lacageed ay Real Madrid siin doonto tababaraha reer France si ay kaga ceyriso shaqada garoonka Santiago Bernabéu.
Yeelkadeeda, macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, isla markaana falanqeeye ka ah shabakada “Sky Sports” ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Ma doonayo inaan ku laabto, sababtoo ah waxay heystaan tababare, mana u noqon karo tababare koox heysata macalin”.
“Waxaad si xushmad leh kagala hadli kartaa kooxda iyo sidoo kale macalinka aan ahayn shaqsi caadi ah, banaanka ayaan ka taaganahay mowduucan, waxaan rabaa in xaalada ay isku badasho mid si fiican ku socota, wax walbana la hagaajiyo”.
“Chelsea waxay i xasuusisaa…” – Klopp oo ka hadlay arrimo badan ee quseeya kooxda Blues, kahor kulanka Axada
“Xiddiga aan kaga daydo kubadda cagta waa Cristiano Ronaldo” – Laacib ka tirsan kooxda Arsenal